"Peinture" ngesidlo sasekuseni (2 P) - i-Villa B&B - I-Airbnb
"Peinture" ngesidlo sasekuseni (2 P) - i-Villa B&B
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Kerstin Und Jürgen
U-Kerstin Und Jürgen unokuphawula okungu-32 kwezinye izindawo.
U-92% wezivakashi zakamuva unikeze u-Kerstin Und Jürgen izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-villa - indawo yethu yokuhlala yangasese - kusukela ngo-1934 itholakala endaweni ephakeme kakhulu yaseFriedrichshafen enokubukwa kwechibi nezintaba. Izungezwe ipaki elinezihlahla ezivuthiwe kanye nedamu lokuqabula. Sinikeza izivakashi zethu amagumbi amathathu ezivakashi anefenisha yothando kakhulu "Photographie", "Peinture" kanye "Les amoureux". Indlu yethu ingaphansi kwesiqubulo esithi "Ukumamatheka oyithumelayo kubuyela kuwe". Ukuhlala e-villa kufanele kusebenze ukuphumula nokuphumula.
Igumbi ngalinye liklanywe ngothando futhi ngalinye. Umklamo uqukethe izakhi zesitayela ezivela eFrance naseScandinavia. Ukunethezeka kwamakamelo ngokuyinhloko kusebenza ukunciphisa, ukuphumula nokuphumula.
I-"Peinture" iyigumbi elikhulu kakhulu elinendawo yokugqoka kanye nobhavu ozimele. Itholakala esitezi esiphezulu, i-"Peinture" inikeza umbono omuhle we-panoramic phezu kweLake Constance nezintaba zaseSwitzerland.
Leli gumbi elibanzi labesifazane linendawo yalo yokugqoka ene-chaise longue kanye nesiqu sokuqala. Indlela yokuphila yesiFulentshi iboniswa kuleli gumbi ngohlelo lombala omhlophe, ompunga, o-violet kanye ne-aubergine kanye nama-antique asesitayela. I-creaking yama-floorboard amadala nawo aqeda lesi sitayela.
Ukugeza kwamahhala kwaseBrithani kuwuhlelo oluvulekile ekamelweni lokulala. Ishawa yemvula ehamba ngezinyawo nendlu yangasese zihlukene.
Izitsha zokudweba ezikhona zikumema ukuthi udwebe. I-Peinture iyindawo ekahle yothando.
I-villa iseduze ne-Fallen Fountain. I-"Kulturhaus Caserne", i-Zeppelin University kanye ne-Cooperative State University itholakala kule ndawo yangaphambili ye-barrack.
Ibungazwe ngu-Kerstin Und Jürgen
Thina - uKerstin noJürgen Schmid - samukela izivakashi zethu mathupha. Ngemva kwe-reception, sihlonipha ubumfihlo bomunye nomunye. Uma sinomuzwa wokuthi izivakashi zethu zivulekele kuyo, siyajabula ukunikeza i-aperitif ehlangene. Ngesicelo futhi uma singayihlela ngesikhathi, izivakashi zethu zingaphinda zicele imenyu yakusihlwa.
Thina - uKerstin noJürgen Schmid - samukela izivakashi zethu mathupha. Ngemva kwe-reception, sihlonipha ubumfihlo bomunye nomunye. Uma sinomuzwa wokuthi izivakashi zethu zivulekele…